स्व.अगनसिंह राई र श्रीमती स्व.कुविरलच्छि राईको शालिक अनावरण - Saptakoshionline
स्व.अगनसिंह राई र श्रीमती स्व.कुविरलच्छि राईको शालिक अनावरण
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ११, २०७६ समय: १३:२०:१५
इटहरी । भिक्टोरिया क्रस भिसी बाट सम्मानीत स्वर्गीय अगनसिंह राईस्व.अगनसिंह राई ( भि.सी.)र श्रीमती स्व.कुविरलच्छि राईको नाममा स्थापना गरिएको अगनसिंह राइ स्मृति प्रतिष्ठानले सुनसरीको इटहरी २ शान्तिनगरमा निर्माण गरेको राईको शालिक अनावरण गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्व. र उनकी श्रीमतीको शालिक अनावरण गरेको हो ।
राइ सन १९४१मा रोयल गोरखा राईफल ब्रिटि स इन्डियन आर्मीमा भर्ति भएका थिए । लामो समय सम्म आफ्नो पेशामा योगदान दिएका राईले भिक्टोरियाबाट सम्मानित समेत भएका थिए । आफनो ठाउँमा विकास निर्माणका काममा योगदान गरेका राईको सम्मानमा शान्तिनगरमा भिसी चौक नामकरण समेत भएको छ । सोही भिसी चौक क्षेत्रमै र हेको राई परिवारको निजी जग्गामा शालिक निर्माण गरिएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद राईको अध्यक्षतामा भएको अनावरण कार्यक्रममा राइ दम्पतीको शालिकको प्रदेस नम्बर १का प्रदेससभा सदस्य सर्वध्व साँवाले अनावरण गरेका थिए ।